Ellicott Dredger dia manampy amin'ny seranana Palermo ao Kolombia - Ellicott Dredges
Ny fidirana amin'ny seranana dia zava-dehibe amin'ny fanondranana sy fanondranana entana manerana izao tontolo izao. Rehefa mihena ny fifamoivoizana noho ny sedimentation sy ny fananganana hafa. Ellicott Dredges no vahaolana.
An Ellicott 670-42 Dragon® Dredge dia novidy ary nalaina am-bavany ankehitriny amin'ny seranana Palermo Port ao amin'ny sampana Magdalena ao Kolombia.
Coremar Group, tompon'ny Palermo Port Cluster sy Retramar (mpiasan'ny seranan-tsambo), dia nandidy sy nandray ny dredge mba hanatanterahana ny fanodinana renirano ho an'ny fananganana sy fikojakojana ny faritry ny indostria.
Dredgers dia nampiasaina tamin'ny lasa mba hitazomana ny volavola an'ny dock an'ny seranan-tsambo. Na izany aza, ny dredge modely Ellicott 670 dia manana halalin'ny fandrefesana 42 metatra (13.5 metatra), izay lehibe lavitra noho ny 36 metatra (11 metatra) mahazatra. Noho izany antony izany, Coremar dia mety hampihena ny fihoaran'ny dronitra miaraka amin'ny dredge Ellicott vaovao.
Ny andiany Ellicott® 670 dia portable suction dredge azo entina mora foana ary mivory eto amin'ny tranokala amin'ny ezaka kely. Ity dredge versatile ity dia mety ho an'ny tompona dredge na ny mpandraharaha maniry ny hividy sambo mora ampiasaina. Ny 670 dia mazàna ampiasaina amin'ny tetik'asa fanamoriana antonony amin'ny toerana toy ny kely seranan-tsambo, renirano ary tetik'asa fanondrahana rano ao anaty tanàna.
Jorge Castellanos, filohan'ny Castec - izay nivarotra ilay dredge ary nisolo tena an'i Ellicott tany Kolombia nandritra ny roapolo taona - hoy ny tompon'ireo seranana matetika dia manofa kameta iray fa ilaina, saingy ny fananana iray dia manome antoka fa ny baobin'izy ireo dia ao anaty toerana ambony indrindra.
"Ny seranan-tsambo any Kolombia dia mitombo ary tsy maintsy mandray sy mandefa sambo miaraka amin'ny entana maro, avy any amin'ny firenena samihafa," hoy izy. "Ny volavola ho an'ny seranan-tsambo dia andraikiny izay midika fa matetika izy ireo dia mila manofa dredges mba hamahana ity tranga ity."
Ny seranan-tsambo hafa manodidina an'i Palermo dia manana olana mitovy amin'ny fananganana sediment, ary ny Dragon® Dredge dia raisina ho vahaolana maharitra ho an'ireo olana ireo.
"Ny fananany ny làlan-tenany manokana dia manome antoka fa (tompon'ny seranan-tsambo) dia afaka mitazona ny vavakelin'izy ireo ary ankehitriny, noho ny lazan'ny Ellicott Dredges miasa tsara eo akaikin'ny seranan-tsambo dia manana fahafahana lehibe hamahana olana izy ireo," hoy i Castellanos. "Manatona anay ny sasany amin'ireo tompon'ny seranana hafa, mahita ny momba ilay dredger 670-42 ao amin'ny seranan'i Palermo."
Atombohy amin'ny Ellicott ny tetikasa famerenana amin'ny morontsiraka